Windows7administrator password hacking (၀င်းဒိုးကိုယ်တိုင်တင်တတ်သူများသာ) ~ IT SuBoo
6/07/2013 နည်းပညာများ No comments
တစ်ခါတစ်လေကိုယ်ပေးထားတဲ့ password ကိုကိုယ်ကိုတိုင်ကိုမေ့သွားတတ်ပါတယ် ။ အဲ့လိုမေ့သွားခဲ့ရင် အဆင်ပြေအောင် password ပြောင်းတဲ့နည်းလေးပါ ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ windows7ခွေတစ်ချပ်ထဲပါ ။ (ဘာဆော့ဝဲလ်မှမလို)
၅ . ဒီတစ်ခါ cmd.exe ဆိုတဲ့ file ကို copy ကူးပြီးအဲ့ cmd.exe file ကို sethc.exe ဆိုပြီနာမည်ပြောင်းသိမ်းပါမယ်..
(c:drive အောက်က windows folder အောက်က system32 folder အောက်က cmd.exe ဆိုတဲ့ file ကို c:drive အောက်က windows folder အောက်က system32 folder အောက်မှာ sethc.exe ဆိုပြီး cmd.exe file ကိုနာမည်ပြောင်းသိမ်းမှာပါ ) (ခြုံကြည့်ရင် sethc.exe နေရာကို cmd.exe က နာမည်ပြောင်းပြီးသူလျှိုအဖြစ်ဝင်နေရာယူတာပါ) အဲ့တာကြောင့် overwrite လုပ်မှာလားလို့ မေးပါလ်ိမ့်မယ် yes ပေါ့ဗျာ (y/n)=y enter
၆ . အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ထွက်လိုက်ပါတော့ CD ခွေထုတ် စက်ကို restart ချပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ဝင်လိုက်ပါ...windows login password တောင်းတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုပါတော့....
၇ . shift key5times (password ကရိုက်လို့ မရဘူးလေ ဘာလို့ ဆို password ကမေ့နေတာကိုး) ဒါကြောင့် shift ကီးကို ၅ ခါထောက်ထောက်ထောက် ဆိုပြီဆက်တိုက်နှိပ်လိုက်ပါ....
၈ . CMD command prompt ပေါ်လာပြီပေါ့ ... အဲ့အထဲမှာကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ password ကိုပြောင်းရမှာပါ...
net user SHANLAY newPassword
net user လို့ ရိုက်ပါ SHANLAY ဆိုတာက ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ administrator ရဲ့ username ပါ (ကိုယ့် username ကိုအစားထိုးပါ) ..... newPassword ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ပြီး enter ပေါ့ .... အိုခေ cmd ကိုပိတ်လိုက်ပါတော့ .... ကယ် ခုနက username မှာ ကိုပြောင်းခဲ့တဲ့ password ရိုက်ထည့်ပြီး windows ထဲဝင်လို့ ရပါပြီ ..............
၉ . ဒီအတိုင်းတာဆိုရင် shift key ၅ ချက်နှိပ်ပြီးလူတိုင်းပြောင်းတော့မှာပေါ့ ... အဲ့တာဆိုရင်တော့ကွိုင်ပဲ ... ဒါကြောင့် အဲ့လိုနှိပ်ရင် cmd box ပေါ်မလာအောင်ပြန်ပိတ်ရပါမယ် .... (shift key ၅ ချက်နှိပ်ရင် cmd box ပေါ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ sethc.exe နေရာကို cmd.exe ကနာမည်ပြောင်းပြီး sethc.exe ပါဆိုပြီး hack ခဲ့တာလေ) ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိစ္စကိုတာဝန်ယူပြန်ဖြေရှင်းရအုံးမယ် ..
၁၀ . C:drive အောက်က windows folder အောက်က system32 folder အောက်က sethc.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်ကမရှိတော့ဘူး sethc.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်နေရာကို cmd.exe ကသူ့ ကိုသူ sethc.exe ပါဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းပြီး sethc.exe ရဲ့ နေရာကိုအစားထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာလေ ... ဒီ command နဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ ..
၁၁ . ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်လိုက်တာက ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ ဒီစာကြောင်းပဲ
copy c:\_windows\_system32\_sethc.exe c:\_ cmd.exe ကြောင့်ပျက်သွားတဲ့ sethc.exe နေရာကို C:drive အောက်က sethc.exe file ကပြန်အစားထိုးမှာပါ (sethc.exe လို့ နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ cmd.exe နေရာကို ပြန်အစားထိုးမှာပါ)
၁၂ . cmd.exe (sethc.exe) နေရာကို sethc.exe(fileအစစ်)ကပြန်အစားထိုးခြင်း
copy d:\_sethc.exe c:\_windows\_system32\_cmd.exe
ကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားတဲ့ c:drive အောက်က sethc.exe ကို c:drive အောက်က system32 အောက်က
cmd.exe နေရာကိုပြန်အစားထိုးမှာပါ..ဒါမှမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်မှာပါ (ဒီနေရာမှာတစ်ခု ကွိုင် ရှိတာက)
CD ခွေနဲ့boot တက်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မူးရင်း ရှိတဲ့ c:drive အပိုင်းက d:drive တို့e:drive
တို့ ဖြစ်နေမှာပါ ... အပေါ်က command မှာ copy d:\_sethc.exe ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ d:\_ နေရာလေးကို
အမဲစာလုံးနဲ့ ပြထားပါတယ် .. ကိုယ့်စက်မှာ sethc,exe(file အစစ်)ကဘယ်အပိုင်းမှာရောက်နေလဲသိမှာမဟုတ်ပါဘူး
...e:\_ မှာရောက်ချင်လဲရောက်နေမှာပါ .. တစ်ကယ်လို့e:\_drive မှာရောက်နေခဲ့ရင် command က copy
e:\_sethc.exe c:\_windows\_system32\_cmd.exe ဆိုပြီးဖြစ်မှာပါ ....ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် copy
ကူးပြီးကြောင်းစာတမ်းလေပြပါလိမ့်မယ် ..... အိုခေပြီပေါ့ ....... login ပြန်ဝင် shift key နှိပ်ကြည့်